Kungani kunezivunguvungu zasolwandle eziningi lapho kunamanzi amaningi olwandle? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iziphepho zasolwandle zifuna ukwazi kakhulu kwezinye izingxenye zomhlaba. Iziphepho ezitholakala ngqo emizileni emibili yemikhumbi ematasa kakhulu emhlabeni, zinamandla aphawuleka kakhulu kunalezo zindawo zolwandle lapho imikhumbi ingahambi khona.
Lokhu kungenzeka noma kungabi yi-fluke. Ngakho-ke abacwaningi abaholwa ngu Katrina virts, usosayensi ogxile kwezesayensi yezomkhathi eMarshall Space Flight Center ye-NASA, eHuntsville, Alabama, naseJoel Thornton, isazi esikhethekile esifanayo eNyuvesi yaseWashington eSeattle, zombili izikhungo e-United States ziye zafunda ukuthi kungani kwenzeka lokhu.
1 Iziphepho zasolwandle
2 Shintsha ekubunjweni kwamafu
Ukuze uqonde ukuthi kungani kunezivunguvungu zasolwandle ezinamandla ezindaweni lapho imikhumbi ihamba khona nalapho ingabuthakathaka kangako, iqembu laseKatrina lenza imephu yokuvela kombani emhlabeni wonke.
Ukuhlaziya ukusatshalaliswa nokuba khona kombani emhlabeni wonke, kutholakala ukuthi bawa nawo cishe ngokuphindwe kabili ngaphezulu ngenhla kwemizila yemikhumbi eshushumbiswe kakhulu oLwandlekazi lwaseNdiya naseningizimu yeChina Sea kunezindawo zasolwandle eziseduze nemizila yemikhumbi futhi enezimo zezulu ezifanayo.
Lo mehluko ebakhona lapho kunezivunguvungu endaweni eyodwa nakwezinye awunakuchazwa ngezinqubo zemvelo noma "ukuqondana nje okulula", kepha kuphethwa ngokuthi izinhlayiya ze-aerosol ezikhishwa ngoshimula bemikhumbi bashintsha inqubo yokwakhiwa kwamafu ngaphezu kolwandle.
Shintsha ekubunjweni kwamafu
Ukukhishwa kwegesi emkhunjini kushintsha ukwakheka kwamafu ngaphezulu kolwandle. Ngalesi sizathu, izivunguvungu ezinamandla kakhulu zenzeka lapho kunemizila yolwandle ematasa kakhulu, ngoba yizindawo lapho kunokukhishwa okungaphezulu kwe-aerosol.
Abaphenyi baphetha ngokuthi izinhlayiya ezikhishwa intuthu yomkhumbi zenza amaconsi asemafwini abe mancane, azenyusele phezulu emkhathini. Lokhu kudala izinhlayiya eziningi zeqhwa futhi kuholele ekusebenzeni kukagesi okwengeziwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Kungani kunezivunguvungu zasolwandle eziningi lapho kunamanzi amaningi olwandle?
Amafu ePíleo, obunye ubukhulu besibhakabhaka
Bakha ithuluzi elisha lokwazi izimpawu zokuguquka kwesimo sezulu